Maxaad ka cabaneysaa tareenka xawaaraha sare leh?
Ma aysan ka fiicneyn maalin ka wanaagsan tii shalay ee tareenkii hore ee Anatolia ee ka tagayay Haydarpaşa. Istanbul waa labadaba qabow iyo baraf uusan ogeyn. Xarunta tareenka ee Haydarpaşa ayaa ka hoosaysa barafka, oo aad uga qurux badan abid, [More ...]
Waxaa jira jawaab celin ka timid bulshada rayidka ah qorshaha aagagga ee xaruntu tahay Haydarpaşa Station
Qorshaha soodhadhka ee daboolaya Haydarpaşa, kala soocida xarunta taariiqda oo ah xarun dhaqameed, dalxiis iyo aag degaan ayaa keenay wadahadalo. Qorshuhu wuxuu sii saadaalinayaa in sagxadda hore ee dhismaha saldhigga jira ay sii wadi doonto bixinta adeegyada gaadiidka tareenka. [More ...]
Marmaray ayaa halis u ah dhimashada xayiraad la'aanta
Professor Dr. Jannada Eyice, 3 in lagu qabto Istanbul. buundada, Marmaray, shaqada dib u soo celinta miiska. Aqoonyahan fanka taariikhda ugu muhiimsan Turkiga ee Byzantine Prof. Dr. Semavi Eyice, Nesrullah Sonay'a TOGUN Newspaper ayaa hadlay. [More ...]
Qalabka Golden Foot Metro ayaa ka bilaabmaysa Febraayo 2012
Isugeynta dhererka Isgoyska Dahabiga ah ee Golden Horn Bridge waa 936 m. Azapkapı Viaduct + Biriijka Birta ah + Buundada wareega + Unkapanı Viaduct ayaa la soo saari doonaa. Baaxadda shaqadan, cutubyada 16 ee dhulka (Beyo (lu [More ...]
Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Üsküdar-Sancektepe, Kadikoy-Kartal ayaa qaadan doona rikoorka. Wadada tareenka ee Kadıköy-Kartal waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo waqti rikoor ah sida bisha 45, halka Üsküdar-Sancaktepe tareenka la dhameystiray bisha 38 iyo [More ...]
Sida laga soo xigtay macluumaadka laga helay saraakiisha TCDD, tirada adeegyada tareenka rakaabka waa la kordhin doonaa ka dib marka uu dhammaado adeegga tareenka isku-xirka ee Xarunta Tareenka ee Haydarpa withina iyada oo loo marayo baaxadda mashruuca tareenka xawaare sare ku dhexmara Istanbul iyo Ankara. [More ...]
Tareenkii ugu danbeeyay ayaa ka tegey Haydarpaşa.
Xarunta tareenka ee Haydarpaşa, oo la sheegay inay ku dhowdahay 2 sano, sababtuna tahay shaqada tareenka xawaaraha sare ku socda, tareenka ugu dambeeya ee dhexmara ayaa ka tagay shalay 23.30. Rakaabku kama warqabin arintaan, laakiin kooxo kaladuwan ayaa saldhigga sugayay si ay uga mudaaharaadaan. [More ...]
Faahfaahinta qorshaha cusub ee Haydarpaşa
Faahfaahinta qorshaha cusub ee Haydarpaşa ayaa la qabtay. Saldhigga Tareenka ee Haydarpaşa, Harbor iyo Qorshaha Masterka ee Ilaalinta Aasaasiga ayaa waxaa ansixiyay Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM). Wargeyska Radikal, wuxuu sugayaa in la hakiyo [More ...]
Nidaamka Funicular si aad u dejiso xeebaha
Duqa Magaalada Istanbul Kadir Topbas, ayaa ka jawaabay su’aalaha saxafiyiinta. Waxaa jiray gaadiid culus oo ka soo talaabay xuduudaha labada dhinac ee Bosphorus, taasoo muujineysa inay xeebta isku xiri doonaan jidadka dhulka hoostiisa mara ee buuraha, Topbaş wuxuu sheegay in howlahan lagu dhameystiri doono waqti aad u yar. [More ...]
Ku-xigeenka CHP Istanbul Ali Ozgunduz, Xarunta Tareenka ee Hadarpasa ee Anatolia, tareenka looma gudbin doono baarlamaanka. Ku-xigeenka CHP Istanbul Ali Özgündüz, Gudoomiyaha Barlamaanka, Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Wasiirka Isgaarsiinta Binali Yildirim oo wata codsi ay kaga jawaabaan [More ...]
Kordhinta saameynta barafka ee subaxdii ayaa sidoo kale saameysay duullimaadyada metrobus. Duullimaadyadii metrobus Avcılar-Küçükçekmece, metrobus sababtuna tahay culeyska culus ee wadada ayaa la joojiyay. Duullimaadyada 'Metrobus' ayaa laga xakumo gobolka. Xilliga Barafka Barafka [More ...]
BRIDGE ma la xirayaa?
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul Kadir Topbaş wuxuu ka jawaabey su’aalaha Fatih Altaylı isagoo kaqeyb galaya barnaamijka Teke Tek kaas oo toos looga sii daayay Habertürk TV wuxuuna toos uga dhacay Matxafka Panoramic ee Topkapı Zeytinburnu. Buundada Bosphorus [More ...]
300 metrobus soo socda
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul Kadir Topbaş wuxuu ka jawaabey su’aalaha Fatih Altaylı isagoo kaqeyb galaya barnaamijka Teke Tek kaas oo toos looga sii daayay Habertürk TV wuxuuna toos uga dhacay Matxafka Panoramic ee Topkapı Zeytinburnu. 300 BRIDGE [More ...]
Tube marin ka timaada Etiler ilaa xeebta
Duqa Magaalada Istanbul Kadir Topbas, barnaamijka 'Haberturk Channel' Teketek 'ayaa ku dhawaaqay mashruucyada ka socda Istanbul. Marka loo eego macluumaadka ay soo bandhigtay Topbaş, maalgashiga lagu sameyn doono Istanbul iyo heerka mashaariicda socda .. - Istanbul [More ...]
« 1 ... 702 703 704 ... 716 »